Guddiga adeegga bulshada ee Baarlamanka federaalka Soomaaliyeed ayaa maanta kormeeray Isbitaalka Madiina – STAR FM SOMALIA
Guddiga adeegga bulshada ee Baarlamanka federaalka Soomaaliyeed ayaa maanta kormeeray Isbitaalka Madiina oo ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ee la dhigo dhaawacyada iyo bukaanada kale.
Xubnaha guddigan oo ka koobnaa dhowr xildhibaan ayaa waxaa isbitaalka Madiina ku soo dhoweeyey agaasimaha guud ee Isbitaalka Dr. Maxamed Yuusuf iyo ku-xigeenkiisa Duniyo, iyadoo ujeedada kormeerkan uu ahaa u kuurgelida xaalada isbitaalka iyo bukaaanada jiifa.
Masuuliyiintan ayaa soo kormeeray qeybaha isbitaalka sida, qeybta gargaarka deg deg ah, Raajada (X-ray), bukaan jiifka, saalada qaliinka Sheybaarka, dayactir ku socday qeybihii hore ee isbitaalka iyo qeybo cusub oo lagu kordhiyey kuwasaoo ay ka mid yihiin hool shirarka loogu talo galay, qeyb bukaan jiif ay dhistay heyadda bisha cas ee Qatar iyo mashruuc Sollar system ah oo loogu talo galay in looga maarmo korontada shidaalka laga dhaliyo.
Intii guddigan ay kormeerkooda ku jireen waxaa goob walba oo ay tagaan warbixino ku siinayey agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf, waxaana guddigan ay si gaar ah u booqdeen dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay Xeebtii Liido oo uu ku jiray ilmo yar oo aabihii iyo eedooyinkiis ay halkaas ku dhinteen isna ay dhaawacyo soo gaareen kaasoo isbitaalka lagu baxnaaninayey.
Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo ugu horeyn ka hadlay shir jaraa’id oo isaga iyo xubnahan ay si wadajir ah ugu qabteen xarunta isbitaaalka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kormeerka guddiga wuxuuna xusay in Isbitaalku uu si caadi ah u wado adeegyada caafimaadka uuna ku talaabsaday horumaro kala duwan, wuxuuna xusay in isbitaalka ay muddo dheer dhinaca dawada ka taageereysay heyadda ICRC.
Xildhibaan Dr. Cabdicasiis Shiikh Yuusuf oo wasiirka Caafimaadka ka soo noqday dowladihii KMG ahaa, haatana gudoomiyaha guddi hoosaadka Caafimaadka ee baarlamanka Somalia oo isna shirkan jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarka uu ku talaabsaday isbitaaalka, wuxuuna xusay in dowlidihii talada dalka isaga dambeeyey xiliga burburka aysan muhiimad weyn siinin adeegyada bukshada oo uu ugu horeeyo caafimaadka wuxuuna xukuumada ugu baaqay iney xoojiso wasaarada caafimaadka si ay gudato waajibaadka loogu talo galay.
Guddoomiyaha guddiga adeega bulshada ee baarlamanka Somalia Prof. Cismaan Max’uud Dufle oo ugu dambeyn ka hadlay shirka jaraaid ayaa sheegay kormeerkooda maanta uu qeyb ka yahay kormeer guddigiisa uu sanadkiiba mar ku kala bixiyo isbitaalada si ay ugu kuur galaan xaaladooda.
“Farqi weyn ayaa u dhexeeya kormeerkan iyo kii sanadkii hore ee aan ku nimid isbitaalkan waxaana ku soo kordhay sida aan soo aragnay waxyaabo badan, waxaana arintaas mahadeeda iska leh maamulka isbitaalka oo xil iska saaray xoojinta howlaha uu isbitaalku u hayo waana uga mahad celineynaa kuna amaaneynaa dedaalkooda” ayuu yiri Prof. Dufle oo intaa ku daray iney warbixin ka diyaarin doonaan xaalada isbitaalka una gudbin doonaan baarlamanka Somalia.
Gudiggan oo sidoo kale kormeerkooda uu ku wehlinayey Xildhibaan Abshirow oo ka tirsan xubnaha guddiga ayaa maalmaha iyo todobaadyada soo socda kormeero kan la mid ah ku tegi doona isbitaalo kale oo ku yaala magaalada Muqdisho.